FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MI-KI - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Mi-Ki
Mi-Ki milamina sy palitao lava, sary natolotry ny Paddington's an'ny Mi-Ki Breeders USA, Inc.
Lisitry ny alika mifangaro Mi-Ki
Ny Mi-Ki dia manana loha 'paoma domed' kely (boribory ny lohan'i Mi-Ki Registra Iraisam-pirenena, fa tsy miorim-paka.) Misy vavam-baravarana fohy sy malalaka misy fijanonana voafaritra tsara (ny faritra misy ny fivoahana manatevin-daharana ny karan-doha) ny molotra atosika na lava sy tery dia heverina ho lesoka lehibe. Ny halavan'ny vavam-borona dia miovaova amin'ny 1/2 santimetatra ny halavany ka hatramin'ny 1 1/2 santimetatra. Ny nify dia somary ambany voatifitra. Ny maso dia lehibe, boribory ary tafasaraka tsara amin'ny maizina no tena irina, fa ny manga misy palitao miloko manga sy volontany na robina misy palitao miloko volontany dia ekena. Ny orona dia salantsalany amin'ny halavany ary fisaka eo amboniny miaraka am-bavorony, tsy voafintina mihitsy. Amin'ny ankapobeny, mainty ny orona fa mety miloko irery amin'ny alika volontany na somary maivana kokoa. Mandehandeha be ny sofina! Ny sofina Mi-Ki dia azo entina miarina na aidina. Ireo karazana sofina roa dia afaka 'manidina' ny sofiny rehefa tena faly. Tsy maintsy volom-borona ny sofina. Ny vozony dia lava halavany, ary tsy tokony hiseho fohy na matevina velively. Na dia miseho aza ny Mi-Ki, dia lava kokoa noho ny hahavony ny vatana, refesina amin'ny soroka. Ny tsipika aoriana dia mahitsy sy mahitsy. Lalina antonony ny tratra. Voafafy tsara ny taolan-tehezana. Ny birao foibe dia manana soroka mandroso tsara izay avela hamela ny fahalalahana mihetsika. Mahitsy hatrany ireo lohalaharana ary tsy miondrika mihitsy. Ny volom-borona dia tsy maintsy eo. Ny tongotra aoriana dia mifanitsy raha jerena avy any aoriana. Matetika no esorina ny Dewclaws, na izany aza misy klioba sasany milaza fa ny dewclaws eo aloha dia tsy voatery. Ny tongotra dia mitovy endrika amin'ny bitro, manify sy lava. Ny tongotra efatra dia tsy maintsy aharatra. Rehefa miala sasatra dia mety mivily kely mankany ivelany ny tongotra eo aloha. Maloto ny tranony ary misy tranokala kely ihany. Atao avo ny rambony, entina mandehandeha ary arched tsara amin'ny vatana amin'ny sisiny. Misy karazany roa ny palitao, malama sy lava. Ny palitao malama dia mijanona eo akaikin'ny vatana sy ny karan-doha tsy misy volombava na volombava amin'ny tarehy, ary misy somotraviavy eo amin'ny sofina sy amin'ny tongony aloha sy aoriana ary ny rambony. Ny palitao lava dia milamina, landy ary mahitsy, misy volom-borona lava eo amin'ny sofina sy amin'ny tongony aloha sy aoriana ary amin'ny rambony. Ny Mi-Ki miakanjo lava dia mety misy volombava sy volombava ary tsy maintsy misy loha voaharatra tsara. Ny loko rehetra dia ekena, ao anatin'izany ny loko maloto. Ny loko matevina dia tsy fahita firy ary sarobidy tokoa. Ny fandehanana dia tokony ho maivana sy malama miaraka amin'ny hetsika maimaim-poana ary rehefa jerena avy eo aloha na aoriana dia tokony ho mahitsy sy marina. Ny fisehoana ankapobeny dia tokony ho ny fahamendrehana sy ny fahasoavana, miaraka amin'ny volo lava sy lava tsy manidina.
Ny Mi-Ki dia manan-tsaina, tony, mamy toetra, be fitiavana ary ny haavon'ny hetsika dia ambany sy antonony. Sariaka sy mailo, manao namana akaiky an'ireo sembana, ahemotra izy io ary mahalana vao mivovo. Ny sasany koa manao feo toa ny yodel na karazana twittering mahafaly. Ity karazana ity dia manana faharanitan-tsaina avo lenta, ka mahatonga azy io ho mpilatsaka hofidina ambony ho an'ny peratra fankatoavana. Tian'izy ireo ny miaraka amin'ny olona ary manaiky mora foana ny olon-tsy fantatra. Ny Mi-Ki dia manana toetra mihintsy, izay mahatonga azy io ho alika fitsaboana mety. Tia ankizy ny Mi-Ki. Ankafizin'ny Mi-Ki ny filentehan'ny masoandro amin'ny varavarankely ary manasa ny tenany toy ny saka. Raha ny marina, ny Mi-Ki iray dia nanangana kittens nilaozana iray manontolo. Ny Mi-Ki dia tsy mahery setra, ary tsy atahoran'ny alika. Io vehivavy io ihany izay nanangona ny fako amin'ny zanany dia nanangana fako dimy Alika kely Lamalese . Tamin'ny fotoana nahatratraran'ireto zazakely ireto efa-bolana dia efa ho lehibe toa an'i Mi-Ki izy ireo. Ny Mi-Ki dia sosialy be ary mitovy amin'ny fombany. Alika kely azo ovaina izy io ka olona maro izay tsy afaka manana biby fiompy mahita fa afaka manana Mi-Ki tokoa. Afaka miakatra sahala amin'ny iray amin'ireo razambeny, ny Chin Japoney, ny Mi-Ki ary mihetsika tahaka ny saka rehefa mipoapoaka, manenjika ary mamaky ny kilalao na mpiara-milalao aminy. Mora ampiofanina izy ireo ary toa maniry ny hizatra amin'ny fomba fiainanao. Alao antoka fa mafy orina ianao, azo antoka, tsy miovaova ity alika ity mpitarika fonosana hialana Syndrome kely alika , entanin'ny olombelona olan'ny fitondran-tena . Rehefa avela ho mpitarika mpitarika ny alika ny alika dia afaka mamorona karazana olana amin'ny fitondran-tena maro izy ireo, ao anatin'izany, saingy tsy ferana, mampiahiahy sy mitehaka amin'ny olon-tsy fantatra, fiambenana , fanahiana fisarahana , fandringananao , mikitika, ary manaikitra mihitsy aza. TSY toetra Mi-Ki ireo, fa ny fihetsika vokatry ny tsy fisian'ny fitarihana eo amin'ny zanak'olombelona. Tadidio foana, alika dia canine fa tsy olombelona . Aza hadino ny mahita ny voajanahary voajanahary ho biby. Mila fitsipika harahina izy ireo, mametra ny maha-izy azy ireo ary tsy mahazo manao azy ary mpitarika tsy miovaova, matoky tena, miaraka amin'ny isan'andro fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana .
Hahavony: 10 - 11 santimetatra (25 - 28 cm)
Lanja: hatramin'ny 5 pounds (5 kg)
Mi-Kis miaraka amin'ny muzzles fohy kokoa, indrindra ny alika antitra, dia atahorana ho voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana. Ny nify Mi-Ki dia mila fanadiovana matetika, indrindra ny karazana fohy muzzled. Mi-Kis koa dia mirona hanana volo be loatra eo anelanelan'ny rantsan-tongony izay mamandrika loto. Ny fanaratra ny tarehy sy ny tongony dia ahafahana mitandrina mora kokoa amin'ny fitazonana azy ireo ho madio sy mahasalama.
Ny Mi-Ki dia trano fonenana tsara na alika condo. Azo zarina mora ampiasaina boatina fako. Afaka mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny toetrandro izy io, nefa tia mivoaka an-tokotany mandehandeha. Mety ho sambatra sy mahasalama amin'ny tokotany kely izy io.
Ny Mi-Ki mila a mandeha isan'andro . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filany ilaina amin'ny fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazany rehetra, ny lalao dia tsy hanatanteraka ny toetrany voalohany handehanana. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotany malalaka sy mimanda. Ampianaro izy ireo hiditra sy hivoaka ny varavarana sy ny vavahady aorian'ny olombelona.
fetra collie sy mixer spaniel mixer
Manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 taona
Ho an'ny biby fiompy dia ampiasao borosy tariby indray mandeha isan-kerinandro hanalana volo maty. Mandrosoa raha tsy ilaina. Ny fampisehoana tapaka ho an'ny Mi-Ki dia tena miavaka. Ny loha, ny hatoka ary ny sofina dia voaharatra avokoa. Ny lohan-doha dia manitatra hatrany am-pototry ny karandohany ka hatrany am-poton'ny tenda. Ny tongotra sy tongotra koa dia voaharatra amin'ny pastern. Ny fiharatana ny ranjo dia misy ny lalandara. Ilaina ihany koa ny manala ny volo eo anelanelan'ny rantsantongony sy manodidina ny pads. Ny antony mahatonga an'io fanapahana io dia ny fampihenana ny loza mety hitranga amin'ny olana ara-pahasalamana. Ny Mi-Ki dia mandatsaka volo kely fotsiny.
Boston terrier miharo Jack Russell
Ny Mi-Ki, amin'ny maha-karazany azy, dia nizara roa tamin'ireo klioba vitsivitsy. Ireo klioba ireo dia mametraka ny fari-piainany manokana ary ny alika dia lasa tsy mitovy amin'ny club and club intsony, saingy mbola manana anarana mitovy daholo ny Mi-Ki. Misy teoria samihafa amin'ny niandohan'ny Mi-Ki.
Araka ny voalazan'i Mi-Ki™Club of America, Inc., ny Mi-Ki dia heverina fa aziatika. Ny fe-potoana nahaterahan'ity alika kilalao kely ity dia niseho tany Etazonia nandritra ny taona 1980. Mizara razambe iraisana amin'ny lolo , ny Maltais , ary ny Chin Japoney . Mampalahelo fa ny tantaran'ny rahona an'ny Mi-Ki dia tsy ahafahana milaza ny isan-jaton'ny karazany tsirairay amin'ny makiazy. Ny Mi-Ki dia neken'ny States Kennel Club tamin'ny 1995.
Araka ny IMR, ny Mi-Ki dia karazany vaovao natomboka tamin'ny faran'ny 1980 tany ho any ny vehivavy iray izay nandeha tamin'ny anarana hoe Micki Mackin, ankoatry ny hafa. Nipetraka tany Milwaukee, Wisconsin, sy ny manodidina azy izy. Nanomboka namolavola karazana alika kely avy tany izy lolo , Chin Japoney , Maltais ary ny kely Shih Tzu ary tamin'ny 1993 dia nisy a lolo / Yorkshire Terrier mifangaro stud izay natolony tamin'ny vehivavy sasany. Mampalahelo fa tsy nitahiry firaketana marina izy, noho izany dia tsy fantatra ny habetsahan'ny fangaro na ny fitambaran'ireo karazana. Ny sasany dia manome voninahitra an'i Micki Mackin tamin'ny fampiasana ny anarany rehefa niantso ireo alika kely Mi-Kis (tononina hoe Mee-Kee) izy. Ny International Mi-Ki Registry dia nanambara fa izy no Mpanorina. Ny IMR dia naka an'io tsindrona io ary tamin'ny alàlan'ny programa fanatodihana henjana, anisan'izany ny firaketana ny ADN tamin'ny alàlan'ny United Kennel Club, Inc., dia mamolavola sy manadio ny Mi-Ki ho lasa karazany vaovao 'vita any Etazonia'.
Kilalao / mpanaradia
CMA = Fikambanana Mi-Ki Continental
IMR = Registra Mi-Ki iraisam-pirenena
MBUSA = Mi-Ki Breeders USA
MCOA = Mi-Ki™Club of America, Inc.
R = Rarities Inc.
States Kennel Club no fisoratana anarana voalohany nahafantatra ny Mi-Ki, tamin'ny alalàn'ny Mi-Ki™Club of America, Inc. Ny rezistra iray hafa dia ny International Mi-Ki Registry. Ny Mi-Ki Breeders USA dia klioba sy fisoratana anarana. Izy ireo koa dia azo aseho miaraka amin'ny IABCA sy ny National Canine Association. Amin'izao fotoana izao ny IMR Mi-Ki dia voasoratra anarana amin'ny klioba ary ny ADNany dia voarakitra ao amin'ny United Kennel Club, Inc.Ny IMR dia mangataka fankatoavana amin'ny alàlan'ny UKC. Tamin'ny 2002 ny Mi-Ki™Ny Club of America, Inc. dia nahazo fankasitrahana feno momba ny alika tao amin'ireo boky fandefasana azy tamin'ny alàlan'ny RVD / UCI, izay monina any Alemana. Ny fanekena RVD / UCI dia mahatonga ireo Mi-Ki ho mendrika aseho any amin'ny firenena 16 hafa manerantany ary ny alika ao amin'ny Mi-Ki ihany no mihatra aminy.™Ireo boky stud ny Club of America, izay natsangana tamin'ny taona 1992. Tsy misy boky stud hafa fantatra fantatra. Ny MCOA dia natsangana tamin'ny taona 1992, ny IMR tamin'ny taona 1999, ny Continental Mi-Ki Association tamin'ny 2002 ary ny Mi-Ki Breeders USA tamin'ny 2003 ho klioba ekena sy lisitra ekena ho an'ny Mi-Ki madio.
'Mi-Kis manidina ny sofin'izy ireo rehefa faly. Ity i Jenny keliko mamy, izay tsy mandre ny sofiny rehefa tsy faly. I Jenny koa dia nanana loko tsara tarehy tamin'ny fako farany: manga, sôkôla ary mena. Fahagagana foana izany ary mahafaly ny loko mety ho azonao, tsy fantatrao mihitsy. ' Sary natolotry ny Paddington's an'ny Mi-Ki Breeders USA, Inc.
shih tzu afangaro bichon frize
'Ity i Willie mandritra ny iraika ambin'ny folo volana. Izy dia somary sariaka kokoa amin'ny olona ary mbola tia alika tsy tia ady. Mamy amin'ny alika rehetra izy, tsy mivovo na mimenomenona azy ireo. Tiany ny milalao trondro sy fakana ary afaka mianatra fika isan'andro. Mipetraka amina tranobe misy alika maro izahay, ao anatin'izany ny Mi-Kis roa hafa, fa ny tena tiany dia Mi-Ki hafa antsoina hoe Chai. Tiany ny miafina ao anaty lalimoara sy valizy. Ankizilahy lehibe amin'ny kilao 7 izy. Mpiambina izy. '
'Willie, Mi-Ki nahatratra ny tsingerintaona nahaterahany. Ny hetsika tiany indrindra dia ny manenjika ny baolina tenisy kely indrindra, saingy izay baolina rehetra dia hahomby. Hendry sy mahatoky tokoa izy. Faly be aho fa nahita an'io karazany io. Mpiambina hatrany. '
Willie ilay Mi-Ki voadio tamin'ny herintaona
'Willie dia alika kely Mi-Ki telo volana amin'ity sary ity. Hendry sy be fitiavana izy. Voaofana taratasy ary efa mahatakatra ny baikon'ny sit. Tiany ny milalao baolina ary mifihina. Manantena izahay fa homena mari-pahaizana ho alika fitsaboana. '
'Ity i Willie the Mi-ki amin'ny 7 volana, milanja latsaka ny 6 pounds. Tsy mandeha izy fa prances ary zara raha mikasika ny tany ny tongony. Mijanona mijery sy mihomehy foana ny olona. Tena marani-tsaina izy, mamy ary somary saro-kenatra amin'ny olona, ​​saingy tena tia alika hafa Retrievers volamena . Tena mpiambina izy. '
Yoshi dia 2 1/2 lbs ary 5 aprily ny aprily. Sary natolotry ny International Mi-Ki Registry
Mi-Ki dia nanonona an'i Kelee izay an'ny iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny Mi-Ki™Club of America, Inc. Kelee dia mipetraka any Canada.
Bulldog anglisy 10 herinandro
Ovy misy fandriana telo — mainty sy fotsy no any Azia, volontsôkôlà sy fotsy ny Pansy, volafotsy sy fotsy ny anjely. Sary natolotry ny International Mi-Ki Registry
Jereo ohatra misimisy momba ny Mi-Ki
Sary Mi-Ki 1
Sary Mi-Ki 2
Sary Mi-Ki 3
amerikana staffordshire terrier boxer mix
sarin'alika alika lhasa apso
airedale poodle afangaro alika kely amidy
Firy taona ahafahan 'ny vorontsiloza velona ho